Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → août → 22 → Bekily : Asan-dahalo : tompon’omby iray sy dahalo roa maty
Tsy mitsitsitsy. « Chef quartier » sady tompon’omby iray no maty voatifitry nandritra ny fanafihan-dahalo nitranga tany amin’iny distrikan’i Bekily iny ny talata alina teo. Nanara-dia ny zandary avy eo ka raikitra ny fifandonana teo amin’ireo mpanafika sy ireo mpanenjika ka nisy roa tamin’ireo dahalo indray no lavo.
Araka ny fampitam-baovao azo dia nitrangana fanafihan-dahalo niharo vono olona tao amin’ny fokontany Belamonty, kaominina Tanandava, distrikan’i Bekily ny alin’ny talata hifoha alarobia teo, tokony ho tamin’ny 10 ora tany ho any. Andian-dahalo mirongo fiadiana no tonga nanafika tao amin’io tanana io, ary tsy nisalasala akory nitifitra izay rehetra nanelingelina ny asa ratsy nataon’izy ireo. Vokany, tompon’omby iray no namoy ny ainy vokatry ny tifitra nahazo azy ary omby miisa eo amin’ny 46 isa teo no lasa.
Nandray ny andraikiny avy hatrany ireo zandary avy ao amin’ny tobim-paritra Beraketa, raha nahare io fanafihana io ary nidina nanara-dia ireo olon-dratsy. Nampian’ireo mpitandro filaminana voaofana manokana avy ao amin’ny Usad moa izy ireo tamin’izany. Teo amin’ny kizo iray, tao amin’ny fokontany Benato, kaominina Beraketa, no nifanehatra ireo andian-dahalo sy ireo mpanara-dia. Raikitra teo ny fifandonana ka tamin’izay indray no nahalavo ireo dahalo roa lahy. Ireo namany hafa kosa dia vaky nandositra rehefa hitan’izy ireo fa tsy resy tosika iretsy mpitandro filaminana, namela ireo omby nangalarin’izy ireo teo. Azo avokoa araka izany ireo omby ary efa naverina tamin’ny tompony. Mbola mitohy moa ny fikarohana ireo dahalo tafatsoaka.
Baleda charles 22 août 2019 at 14 h 07 min · Edit
Tsy ny fanaovana ny asa no ilaina fa FAHAIZANA MANAO IZANY ka hita eo amin’ny VOKATRA AZO.Karamain’ny VOLABAHOAKA IREO lazaina fa MPITANDRO FILAM….ireo ary SOTRAPONY no NANEKENY HIKARAMA amin’io ASA io,ka tsy misy tokony HISAORANA ZZY IREO fa mbola tokony handalo fitsarana. Sy fanadihadiana ireo REHETRA NANAO OPERATIONS hijerena MARINA NY MODES OPERATOIRES NAMPIASANY sy ny vokatra azo sy tokony ho AZO..Ary izay no tokony HZMPISONDROTRA GRADY SY HAHAVOASAZY fa tsy resakabe fotsiny na PROMOTION à titres quelconques
Rolland Edouard Firmin 22 août 2019 at 12 h 40 min · Edit
Somary mahagaga ahy kely isakizay misy tranga toy zao dia tsy azo lay dahalo sisa velona fa tafatsoaka,tsy azo henjehina ve izy ireny rehefa hita iny mitsoaka,samy manana basy dia tokony tsy matahotra manenjika ny mpitandro filaminana.
Isaorana aloha zava-bitany mpitandro filaminana na izany aza dia tokony asiana fanatsarana hatrany fa tena mijaly vahoaka na Ambanivohitra na Antanandehibe